Ufuna izimpendulo ngokushawa kwendodana yakhe | News24
Ufuna izimpendulo ngokushawa kwendodana yakhe
ISITHOMBE:SITHUNYELWE USandile Mkhize usehlala engumuntu ogqigqa izibhedlela. Kumanje usehlinzwe izihlandla ezintathu kanti umama wakhe uNksz Nonhlanhla Nzama ukhathazekile ngempilo yakhe.
UTHI ufuna izimpendulo umama womfundi owashaywa ngesihluku waphinde washiswa ngezinsimbi ngoba esolwa ukuthi weba izimpahla zikasonhlalakahle wasendaweni yase-Elandskop ngoNhlolanja ngonyaka odlule.
UNksz Nonhlanhla Nzama ongumama kaSandile Mkhize (23) uthi kuze kube imanje akazitholi izimpendulo kubantu abasolwa ngokushaya indodana yakhe. Indodana yakhe kumanje iphila ngokuhlinzwa ngoba odokotela bethi umzimba wayo wonakala ngaphakathi ngenkathi eshaywa.
UMkhize ubefunda esikoleni samabanga aphezulu kwaMncane uphoqeleke ukuthi ayeke isikole ngawo unyaka odlule ngoba umzimba wakhe usubuthaka nangenxa yokuhlala ngokugula.
Ngokuchaza kukaNzama uthi indodana yakhe kumanje igqigqa izibhedlela ezahlukene ngoba kuningi okonakala emzimbeni wayo kubalwa nezinso odokotela asebeveze ukuthi ziyahluleka ukusebenza kahle emva kokushaywa kwakhe.
Elanda umama kaMkhize uthe isigameko lesi senzeka ngonyaka odlule lapho ongusonhlalakahle esola indodana yakhe ukuthi yebe izikhiye zemoto, ikhompuyutha notshwala obabubiza u-R10 000. Uthe lokhu kwenzeke emva kokuba indodana yakhe kanye nomunye umfundi becelwe usonhlalakahle ukuthi bayobeka ukudla endlini yakhe ngoba ukudla kwakungeke kusabekwa esikoleni ngoba kwase kudlule isikhathi okwabe kulethwe ngaso esikoleni. Usonhlakahle lona kuthiwa nguye onenkontileka wokuphakela abafundi esikoleni kwaMncane.
“Ngokuchaza kwendodana yami bathunywa ukuthi bathathe ukudla bakuyise endlini yakhe ngoba kwakungeke kukwazi ukubekwa esikoleni. Ngempela bakuthatha bakuyisa lapho nokuthe ngakusasa usonhlalakahle wabika ukuthi kungene abantu abangakaze bangene emzini wakhe qede kwalahleka izimpahla. Wasola indodana yami kanye nalo mfundi ababethunywe naye ukuhambisa ukudla ukuthi bayokubeka emzini wakhe.
“Bamzingela bamthola ezihambela bamfaka ebhuthini yemoto, bayomvalela izinsuku bemshaya bemshisa nangezinsimbi nopulastiki. Umfundi lona abe ehamba naye bamthola naye washawa kodwa wabuye wadedelwa.
“Indodana yami iyona eyashaywa kakhulu ngoba yaze yaphindwa ihlandla lesibili bayibamba beyivalele beyishaya,” kusho uNzama.
Lo mama obekhala izinyembezi ngesikhathi exoxa lolu daba uthe okubuhlungu, kulaba bantu ababeshaya indodana yakhe kukhona nonguthisha ofundisa kuso isikole kwaMncane nomunye athe uyiphoyisa. Uthe baze bayithola indodana yakhe kwelinye lamahlathi e-Elandskop emva kobika udaba emphoyiseni.
“Okubuhlungu lavulwa icala, saya enkantolo nokuthe ngokuhamba kwesikhathi ngatshelwa ukuthi selivaliwe ngaphandle kwami. Ngashayelwa ucingo umseshi engitshela ukuthi icala selisuliwe ngaphandle kokuthi mina njengomzali wengane ngaziswe. Okunye engakuzwa ukuthi izimpahla zatholakala. Ngifuna ukuwazi ukuthi izimpahla lezi zatholakala kuphi njengoba mina ngashayelwa ingane yacishe yafa. Kubuhlungu kumina njengomzali ukubona ingane yami imabhadubhadu kanje umzimba. Isifana nomuntu okhubazekile yize yayiziphilela. Ngidinga izimpendulo kubenzi balokhu ukuthi bangitshele ukuthi kumele ngenzenjani uma isimo somntwana wami sinjena,” kusho uNzama.
Okhulumela i-Independent Police Investigative Directorate (Ipid) uMnu Robbie Raburabu uthe uMkhize kumele ilivule kabusha , wathi uma enokwesaba angaxhumana nehhovisi le Ipid ukuze asizakale.